Madaxweynaha Somalia iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo Baydhabo gaaray iyo Dibad baxyo looga soo horjeedo oo Socda. – idalenews.com
Madaxweynaha Somalia iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo Baydhabo gaaray iyo Dibad baxyo looga soo horjeedo oo Socda.
Wararka aan ka heleyno Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay ayaa sheegaya in halkaasi uu gaaray Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo.
Madaxweynaha waxaa socdaalka uu ku tagay Magaalada Baydhabo ku wehliya Wasiiro iyo Wasiiro kuxigeeno katirsan Baarlamaanka Soomaaliya , Xildhibaano iyo Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed.
Sida aan Wararka ku heleyno Madaxweynaha iyo Xubnaha lasocda ayaa booqday Xarunta Taliska u ah Ciidanka Milatariga ee Gobolka Baay , waxa ayna halkaasi kula kulmeen Madaxweynaha iyo xubnaha lasocda Maamulada isdiidan ee Baydhabo looga dhawaaqay iyo Xildhibaano katirsan Baarlamaanka.
Amaanka Madaxweynaha iyo Xubnaha lasocda waxaa si weyn u ilaalinaya Ciidamo gaar ah oo Madaxweynaha ka raacay Magaalada Muqdisho iyo ciidamo katirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Itoobiya ee Baydhabo jooga.
Dhinaca kale Magaalada Baydhabo waxaa hada kasocda dibad bax balaaran ay dhigayaan Shacabka ku dhaqan Magaaladaasi gaar ahaan kuwa taageersan Maamulka Lixda Gobol uu Hogaamiyo Madoobe Nuunow Maxamed.
Dibad baxa ayaa lasoo sheegayaa in looga soo horjeedo socdaalka Madaxweynaha uu manta ku tagay Baydhabo, waxa ayna Shacabkaku eedeenayaan Madaxda Dowlada in ay wadaan hagar daacis iyo lugooyo ka dhan ah Maamulka Lixda Gobol.
Idale News Online, Baydhba
DaawoCiidamada Itoobiya oo si caadi ah u dhax lugeeyey Wadooyinka Degmada Xudur.
Akhriso Warkii Ugu Dambeeyey Ee Baydhabo Janaay